Akụkọ - Onyinye Asọmpi Azụmaahịa
13TH, OKTOBA 2020
Emepere emume mmeghe nke yun Baituan War na 2020 n’abali iri na ise n’onwa asato. guzobekwara onyinye.
N'oge agha nke ulo nke Azụmaahịa, ndị agha anyị "egbe egbe" ndị isi ụlọ ọrụ ọ bụla na-ezukọ iji nye ndụmọdụ na atụmatụ, anyị na-amụta site na ibe anyị iji wusie onwe anyị ike. Ma onyeisi ma ndị ọrụ ahụ tinyere ike ha niile n'ọgụ ahụ
N’emume nturu ugo ahụ, mmemme dị iche iche nke Legion kwadebere, nhazi njikwa nke Kọmitii Njikọ nke Legion na-emeri, yana mmemme mmekọrịta nke ajụjụ ọmụma na azịza ha niile na-eme ka onyinye ahụ pụta ìhè, dị ịtụnanya ma na-atọ ụtọ. The òkè nke azụmahịa nwe, ka anyị ghọta na ịdị adị nke ọdịiche, na njikwa na ọkachamara ihe ọmụma nwere ohere maka mmelite. Ngo a haziri site na Chamber of Commerce emeela ka ụlọ ọrụ azụmaahịa ndị mba ọzọ Hebei dịrị n'otu。
Companylọ ọrụ anyị chịkọtara asọmpi a, na-adọta ike nke ndị ọzọ ma na-ebelata ọdịiche ahụ. N'ime ọnwa ole na ole sochirinụ, anyị ga-ewusi ndị ọrụ azụmaahịa anyị ike ma bulie usoro njikwa anyị. Ezinụlọ ụlọ ọrụ anyị ga-ele anyị anya ọhụrụ. Ọkwa dị elu nke ọkachamara ọkachamara iji zute narị ọhụrụ League League.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere anyị, kpọtụrụ anyị iji sonyere anyị. Anyị dị njikere ijikọ aka na ndị na-eto eto na-achọsi ike ịmepụta usoro ahia mba ụwa ma ghọta uru ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu. Anyị na-atụ anya na n'okpuru nduzi nke nrọ anyị, anyị ga-enweta mmeri nke ndị ahịa anyị, ụlọ ọrụ na ndị ọrụ!
ebube nke ụlọ ọrụ
Nsọpụrụ onwe onye
Post oge: Nov-23-2020